मोदी हाइड्रोपावरले साधारण शेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आगामी भदौ २६ बाट साधारण शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ११ लाख ५० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । यो शेयरमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र (उद्योग प्रभावित क्षेत्र) पर्वत जिल्लाका बासिन्दाले मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । यसको धितोपत्र निष्काशन तथा विक्री […]
काठमाडौँ १७ भदौ । निवर्तमान जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चढेको भाडा करिब चार लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । सुरुमा साइकल चढेर चर्चामा रहेका मन्त्री पासवान एक महिनापछि गाडी चढ्न थालेका थिए । त्यसपछि जिल्लाका कार्यक्रम जाँदा प्रायजसो हेलिकोप्टर चढ्ने गर्थे । बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका पासवान मन्त्रीबाट बाहिरिएको एक महिना […]
सुन टल्काइदिन्छु भन्दै यसरी लुट्छन् सुन
काठमाडौ । गहना मैलोधैलो भएको छ ? चिन्ता गर्नुपर्दैन, घरघरै सफा गरिदने समूह डुल्दै छन् । टलक्क टल्कने सफा गहना लगाउन चाहनाले यस्ता व्यक्तिलाई गहना सुम्पेर ढुक्क चाहिँ नहुनुस् किनकि तपाईं तिनिहरुबाट लुटिन सक्नुहुन्छ। सफा गरिदिने बहानामा गाउँ–गाउँ चहार्ने समूहले रसायन प्रयोग गरेर सुन लुटिरहेको पाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पुराना गहना पनि एकैछिनमा टल्काइदिने […]
पर्वत, १३ भदौ । पर्वतमा निर्माणाधीन मध्य मोदी जलविद्युत् आयोजनाका कारण मोदीखोलाको किनारमा अवस्थित पर्यटकीय स्थल विरेठाँटीबजार जोखिममा परेको छ । आयोजनाको व्यवस्थापन पक्षले अव्यवस्थित ढङ्गले खोलामा बाँध लगाउँदा पर्यटकीय बजार विरेठाँटीको बस्ती नै जोखिममा परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । समयमै बस्तीक्षेत्रको खोलामा बाँध नहाल्दा पर्वतको सिमानामा रहेको कास्कीको दाङसिङ गाविसमा पर्ने पुलपारी विरेठाँटीमा […]
Posted in पर्यटन,बिजनेस / अर्थ Read More »
स्वास्थ्य चौकीका लागि छ रोपनी जग्गा दान
पाल्पा, १२ भदौ । रामपुर नगरपालिकाको १४ गेझामा स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि छ रोपनी जग्गा दान प्राप्त भएको छ । गेझा बस्ने गोपालप्रसाद पन्तले स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि जग्गा प्रदान गरेका हुन् । “नगरपालिकाको केन्द्रबिन्दुबाट टाढा रहेको गेझा क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएपछि यहाँका नागरिकलाई सेवा लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले जग्गा प्रदान गरेको हुँ” – […]
काठमाडौं,११ भदौं । नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आन्तरिक स्रोतबाट तत्काल करिब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सकिने भएको छ । विद्युत् उत्पादनमा लगानी आह्वान भएमा यो रकम तत्काल दिने सरकारी कोष तथा कम्पनीहरूको प्रस्ताव छ । जलविद्युतमा स्वदेशी लगानीबारे ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार बोलाएको छलफलमा सरकारी कोष तथा कम्पनीहरूले विद्युत्मा लगानी प्रस्ताव गरेका […]
करिब पाँच अर्ब ५० करोडको मल आयात
काठमाडौँ, १० भदौ । कृषि विकास मन्त्रालयले अहिले रासायनिक मलको अभाव नरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा योगन्द्र कार्कीका अनुसार डिएपी, पोटास र युरिया मलको अभाव हुन नदिनका लागि कृषि सामग्री संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई करिब तीन लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्न परिपत्र गरिएको छ । संस्थान र कर्पोरेसनले सरकारी अनुदानमा सो […]
ओखलढुंगाका किसानहरु व्यवसायिक आलु खेतितर्फ आकर्षित
ओखलढुंगा, ९ भदौ / ओखलढुंगामा किसानहरु व्यवसायिक आलु खेतितर्फ आकर्षित भएका छन् । छोटो समयमा थोरै लगानीले पनि राम्रो आम्दानी हुने भएकोले आलु खेति तर्फ कृषकहरु आलु खेती तर्फ आकर्षित भएका हुन् । जिल्लाका पोकली रगनी भुसिंगा, पात्ले भूभागमा र मध्य तथा बेसीँका फाटहरुमा हिउँदे तथा वर्खे आलु खेती गर्ने गरीएको छ । जिल्लाको २ हजार […]
कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैकको परिपत्र, कतिसम्म ऋण दिन पाउने बैंकले ?
काठमाडौं, ९ भदौ / करिब ५ हप्ताअघि जारी भएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले बुधबार परिपत्र गरेको छ । सेयर धितोको प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिका कर्जासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । यस्तो कर्जाका लागि धितो मूल्यांकन गर्दा सेयरको १ सय ८० व्यापार दिनको औसत मूल्य वा प्रचलित बजारमूल्यमध्ये जुन कम […]
४ करोडको सेयर आजबाट खुल्यो , हेर्नुहोस् कहाँ–कहाँबाट दिन सकिन्छ आवेदन ?
काठमाडौं । आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ले आगामी भदौ ५ गतेबाट सर्वसाधारणका लागि शेयर निश्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ४ लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीले यसमध्येबाट ८ हजार कित्ता कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरेको साथै २० हजार कित्ता शेयर यसअघि नै सामूहिक लगानी कोषका […]